Khayre oo gaaray Dhuusamareeb iyo madaxda D/Goboleedyada oo soo dhoweeyey | SMC
Home WARARKA MAANTA Khayre oo gaaray Dhuusamareeb iyo madaxda D/Goboleedyada oo soo dhoweeyey
Khayre oo gaaray Dhuusamareeb iyo madaxda D/Goboleedyada oo soo dhoweeyey
Ra’iisal wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka digey garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug.
Ra’iisal wasaaraha Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaaladaasi, xili ilaa saaka ay socotay qaban qaabada soo dhoweynta wafdigaasi.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed (Qoor-Qoor) madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islmaan (Axmed Madoobe) madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare Wasiiro iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug,madaxda ugu sareysa galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyay wafdiga ra,isulwasaare Kheyre.
Ra’isulwasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato Madaxda maamul goboleedyada oo iyaguna ku sugan Dhuusamareeb, oo uu maalmihii u dambeeyay uga socday kulamo gooni gooni ah.
Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ka wada-hadli doona arrimaha la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo adkeyn lahaa wadashaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka.
Ugu dembeyn magaalada Dhuusamareeb ayaa markale marti-gelin doonta shir u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamulada, iyada uu soo dhammaaday wajigii kowaad ee shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka.
Previous articleKheyre oo gaaray Dhuusamareeb
Next articleKhayre oo gaaray Dhuusamareeb iyo madaxda D/Goboleedyada oo soo dhoweeyey